Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Biyo -xireenka Hydro Uganda: Dalxiis Cusub oo Cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Guddiga Dalxiiska ee Uganda (UTB) ayaa la-tashaday waaxda tamarta si ay u ballaariyaan Badeecadaha dalxiiska ee Uganda oo ka baxsan dalxiiska ku saleysan duur-joogta iyada oo la saxiixday Heshiis Isfaham (MOU) Shirkadda Korantada Korantada ee Uganda (UEGCL) si ay u suuqgeeyaan 600MW Karuma Hydro Power Dam iyo 183MW Isimba Hydro Power Dams oo ah alaabooyinka dalxiiska kaabayaasha.
UTB waa inay ka caawiso UEGL inay xirxirto oo ka ganacsato mashaariic iyo hawlo kala duwan oo qorshaysan biyo -xireennada korontada.
Waxqabadyada dalxiiska iyo badeecadaha lagu darayo waa booqashooyinka dhirta, safarrada doonyaha, kalluumaysiga isboortiga, tas -hiilaadka martigelinta, iyo xusuus -qorka.
MOU wuxuu saxiixay Sebteembar 7, 2021, biyo -xireenka Isimba wuxuu taageeraa wadista UEGCL si ay uga faa'iideysato hantideeda si ay u kala duwdo faylalka ganacsiga una wanaajiso sii jiritaankeeda sida walaac sii kordhaya.
“MOU -kani wuxuu calaamad u yahay bilowga safar muhiim u ah Uganda. Markii la keenay miro -dhal, horumarka guulaystay ee Mashruuca Koronto Hydro Karuma iyo Mashruuca Awoodda Biyo -gelinta Isimba ee goobaha dalxiiska ayaa sii kala duwanaan doona faylalka dalxiiskeenna, sidaa darteed, waxay gacan ka geysan doontaa ujeeddooyinkayaga asaasiga ah oo ah, si joogto ah u kordhisa mugga (tirooyinka) iyo qiimaha (dakhliga) dalxiiska ee Uganda iyo fidinta, qoysaska reer Uganda iyo hab -nololeedyada abuurista shaqooyinka iyo kordhinta dakhliga canshuuraha, ”ayay tiri Lilly Ajarova, oo ah Madaxa Guddiga Dalxiiska Uganda, markii uu saxiixay heshiiska. Waxay u mahadcelisay maamulka UEGCL oo xiisaynaya dalxiiska iyo inay la xiriireen UTB si ay u sameeyaan iskaashigan qiimaha ku daraya.
“Kala -duwanaanshaha iyo dhiirrigelinta alaabada dalxiiska ee ka baxsan dalxiiska duur -joogta si loogu daro kuwa kale, diinta, dhaqanka, cunnada (cuntada) iyo hadda dalxiiska kaabayaasha, ayaa aad muhiim noogu ah qayb ahaan iyo hubaal ahaan UTB. Taasi waa sababta, Qorshaheena Istiraatiijiyadeed ee 2020/21-2024/25, UTB waxay mudnaanta siisay iskaashiga milkiilayaasha goobta dalxiiska, waaxda gaarka loo leeyahay iyo Waaxaha iyo Waaxaha kale ee Wasaaradaha si loo horumariyo loona xiro badeecadaha kala duwan ee dalxiiska si loo dheereeyo muddada joogitaanka goobta , taas oo kordhineysa dakhliga dalxiiska, ”ayay tiri Ajarova, gaar ahaan suuqa gudaha.
Dr. Eng. Harrison Mutikanga, oo ku hadlaya magaca UEGCL, ayaa sheegay in MOU uu waafaqsan yahay UEGCL Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Shanta Sano (2018 -2023) kaas oo ay ka mid yihiin kuwa kale, oo diiradda saaraya ujeedka ugu muhiimsan ee kor u qaadista faylalka ganacsiga.
Waxa uu ka dhawaajiyay in ka faa'iidaysiga hantida tamarta badan ee tamarta sida badeecada dalxiiska ay wax weyn ka tari doonto furitaanka kaabayaasha Awoodda dalxiis ee Uganda. Tan waxaa lagu saleeyay xaqiiqda ah in markaa saldhigyada korontada ay leeyihiin astaamo u gaar ah dusha iyo dhulka hoostiisa. “UEGCL ahaan, waxaan ballan -qaadaynaa ballanqaad guud oo ku aaddan iskaashiga,” ayuu yiri Mutikanga.
Dalxiiska goobaha quwadda korontada ma ahan mid cusub maadaama tan lagu muujiyey goobta tamarta korontada ee Three Gorges ee Shiinaha, goobta Livingstone ee Zambia, iyo goobta Niagara Falls ee Kanada.
Xiriirka ka dhexeeya labada waaxood, si kastaba ha ahaatee, ma ahayn mid qallafsan tobankii sano ee ugu horreeyay qarnigii 21aad, markii ay Dowladda Uganda bilowday dadaal xooggan oo ay ku kordhineyso awoodda korontada iyo awoodda tamarta ee dalka ka dib markii ay hoos u dhacday baahida loo qabo warshadaha iyo dadka oo sii kordhaya. Kani wuxuu ku yimid kharash aad u sarreeya warshadaha dalxiiska maadaama goobihii sumcadda lahaa ee webiga Niil ee caan ku ahaa rafting-ka iyo kayaking-ka heer caalami ah lagu sadqeeyay magaca horumarka.
Sannadkii 2007, Bangiga Adduunku wuxuu maalgeliyey mashruuca tamarta korontada ee Bujagali, taas oo sababtay in la waayo tii kowaad ee fasalka 5 -aad ee Rapids -ka Bujagali oo meesha ka saarta Oracle of Falls, Nabamba Budhagali.
Aagga Kalagala Offset ayaa la abuuray, oo u dhexeeya Ururka Horumarinta Caalamiga ah (Bangiga Adduunka) iyo Dowladda Uganda. Heshiiska ayaa loo sameeyay si loo yareeyo khasaaraha ka dhashay biyo -xireenka Bujagali waxaana lagu qeexay in aagga la qoondeeyay uusan ku fatahi doonin mashruuc kale oo biyo -gelineed. Si kastaba ha ahaatee, sannadkii 2013 -kii ayay dawladdu ka heshay Exim Bank of China dhaqaale dheeraad ah oo lagu dhammaystirayo dhismaha biyo -xidheenka oo dhan $ 570 milyan, iyada oo la burburiyey heshiiskii.
Waa la hubaa, koronto -dhalintu lama huraan ayay u ahayd horumarka iyo warshadaynta dalka, in kasta oo qiimaha 0.191 senti halkii unugba uu weli ka hooseeyo halka ay miyiga Uganda gaadho, marka la eego culayska loo gudbiyey qoysaska. Waxa dadka ku qanciyey waxay ahayd in buundada Isimba, oo loo dhisay biyo -xireenka, ay ugu yaraan fududeysay isu -socodka degmooyinka Kayunga iyo Kamuli, oo beddeshay doontii baabuurta ee aan la isku hallayn karin oo kor u qaadday ganacsiga iyo dalxiiska.
Hoos-u-dhaca, biyo-xireenka cusub ee Isimba ee Niilka ayaa weli caan ku ah rafting-ka biyaha cad iyo tartamada heer-caalami ah oo ay ka mid yihiin Bandhigga Xorriyadda Niil oo soo jiita walaalaha kaymaha ee ka socda USA, Russia, iyo Koonfurta Ameerika iyo sidoo kale Yurub, kuwaas oo badankoodu tababarteen oo ku saabsan wabiga Niil si loogu diyaar garoobo tartamada rafting biyaha cad ee adduunka.
Guddoomiyaha Guddiga UTB Mudane Daudi Migereko, oo si xiiso leh u ahaa Wasiirka Tamarta heerkii ugu sareysay ee biyo-xidheenka 2006, ayaa saxiixa ka sheegay in MOU uu qayb ka yahay ajandaha iskaashiga istiraatiijiyadeed ee UTB oo leh hay'ado iyo hay'ado muhiim u ah dadweynaha, kuwa gaarka ah, iyo kuwa aan macaash doonka ahayn shaqadu waxay saamayn toos ah ku leedahay dalxiiska.
Sannadka 2019, dawladdu waxay dib u soo celisay qorshayaal ay ku cunaqabataynayso daraasad suuragal ah oo lagu dhisayo biyo-xireenka 360-megawatt ee Murchison Falls National Park iyada oo loo sii marayo M/S Bonang Energy and Power Ltd. oo ka socota Jamhuuriyadda Koonfur Afrika iyo Norconsult iyo Mashruuca Hydro Machadka JSC, kaliya si loo xiro cadaadis ka yimaada Ururka Howl -wadeenada Dalxiiska Uganda (AUTO) iyo Bulshada Rayidka.
Waxaan rajaynaynaa, in dib -u -habaynta diblumaasiyadeed ee UTB ee qaybta tamarta ay wax -tar u yeelan doonto, xabbad -joojinta aan xasiloonaynna way dhegi doontaa; raadka warqadda ayaa si kale sheegaya.